isikhumba esingokwemvelo ukunakekelwa izithako | Phil Joe Soap Co.
Tag: isikhumba esingokwemvelo ukunakekelwa izithako
Posted on Mashi 19, 2018
Yemvelo Skin Care Izithako Ezizokwenzeka Lukhulu Kuwe
Namuhla kukhona imikhiqizo eminingi isikhumba ngaphandle emakethe, okwenza kube nzima ukwazi ukuthi yini ekufanele. Kubantu abaningi, imikhiqizo abawuthandayo ukunakekelwa kwesikhumba kungaba umkhiqizi abalulekile umonakala, amakhemikhali, izithako, ubuthi. Ngibiza ke "intengo wangempela ubuhle." Iqiniso kuyinto, iningi esitolo-uthenge, ngokwezimakethe-kukhiqizwa imikhiqizo ubuhle ukuza olungiselelwe nge ngamakha yokufakelwa, imibala, stabilizers, nezivimbelakuvunda a ukuthi kalula imunceke ikhule ezimbotsheni isikhumba, engase okubangela uhla imiphumela yempilo ezingezinhle. Nakuba kungezona zonke lezi amakhemikhali nolimazayo isikhumba sakho, kungcono ukubheka imikhiqizo uzame ukugcina ibe mincane.
Izinto kanye nezici ezitholakala imikhiqizo ubuhle kungenzeka zilimaza kulo lonke ukuqhubeka kwempilo yazo izikelemu, esekelwe indlela lekukhicitwa Kusetshenziswe abathengi, Kusukela izindlela ukuthi kukhona abanazo kanye nomthelela yabo emibi imvelo.
Ngakho obungenza ukuthi lokhu nomthelela ubuhle yakho yenjwayelo? Izindaba ezinkulu wukuthi ziningi ongakhetha umkhiqizo yemvelo isikhumba sakho - ngisho izinwele zakho, namazinyo noma izipikili -look intando yabo engcono ukugwema imikhiqizo ezinkulu commercial futhi eziyingozi. Abantu emhlabeni wonke ziye abaqhuba ukusetshenziswa kwemikhiqizo ukunakekelwa isikhumba esingokwemvelo, kwaphela amakhulu eminyaka futhi ube ezinye isikhumba lihle kakhulu ngoba wabo.
The Hidden ubuthi of Iningi Imikhiqizo yobuhle
Ngeshwa, namuhla kungcono engokoqobo ukuthi imikhiqizo eminingi mass-kukhiqizwa sisebenzisa nsuku zonke - kungakhathaliseki ukuthi ubuhle ukunakekelwa siqu anezinto eziningi zokwenziwa izithako ezingaba avale okubangela oluqubuka empandleni isikhumba sakho futhi ekuthuthukiseni ukusabela engadingeki.
Ukuthenga imikhiqizo ukunakekelwa kwesikhumba kungaba nzima kulezi zinsuku, nge nezindlela eziningi kangaka ezahlukene kufinyeleleke futhi ebonakala elingapheli, kanzima athi uhlu isithako kuwo wonke ubuso ukugeza, elangeni bese khuhla iphakethe. Eqaphela ukuthi kukhona okungalunga imikhiqizo okudayiswayo ithengiswe ukuncela ngqo isikhumba sakho futhi ibangele izinkinga ezinzima, ufuna ukugcina iso kulokho uyangezwa emikhiqizweni yakho nendlela isikhumba sakho iyaphendula.
Lapho ngifuna imikhiqizo ukunakekelwa kwesikhumba, ukubona imihlahlandlela efanayo ukuthi ukulandela ukudla okunempilo: ukuzingelwa ukuthi abe lemali ezinhle izithako ezingacubunguliwe, ngaphandle amakhemikhali anamandla noma ulinganiselwe lutho yokufakelwa. A Ukubusa wabo, the eduze nemvelo umkhiqizo isikhumba yemvelo, kulapho isikhumba sakho bayokwazisa futhi bakwazi ukuncela izithako okunenzuzo ukuba ngcono impilo yawo.
brand eziningi ezinkulu abanesikhumba imikhiqizo ukunakekelwa esitolo-uthenge unezithako ezinobuthi kanye namakha chemical okuhlotshaniswa zonke izinhlobo nezindaba - ngokwedlulele kakhulu futhi ezinzima amacala komzimba, ngisho nomdlavuza.
Kwezinye imiphumela emibi kakhulu njalo usebenzisa imikhiqizo ukunakekelwa kwesikhumba nge ubuthi ukuchayeka amakhemikhali yokufakelwa kungaba kuyinto i-hormone ukungalingani kusukela imikhiqizo eminingi aqukethe i-hormone disruptors. Lezi yangaphandle, noma exogenous, hormone ezitholakala ezidayiswayo kukhona izinto wadala ngaphandle komzimba ukuthi angase enze njengenyoka, noma zithinte hormone emzimbeni. Bona nifaka zokwenziwa, hormone ipatent ukuthi nomthelela ohlelweni endocrine futhi kungaba nomthelela umjikelezo lomame kokuya esikhathini, wenzalo ngisho i-hormone amazinga e amadoda.
Ngokuvamile okuthiwa endocrine disruptors, ezinye izakhiwo yamangqamuzana lezi amakhemikhali 'zifana estrogen zemvelo eduze ukuze ukufanisa ku la mangqamuzana efanayo emzimbeni. Ngakho umzimba akazi ukuthi ukuhlukanisa la ma-hormone yokufakelwa kusukela hormone yemvelo kanye. Kuphakathi kokuthi bophezela la mangqamuzana - ngakho-hormone yakho azisebenzi like kufanele zisebenzele - bese uvula zezakhi zofuzo noma ngaphandle kwe-, ukwandisa izici ezingezinhle estrogen, noma ukuhamba ukuze nucleus amaseli ', lapho ukuzikhandla nomthelela omubi kuma-chromosome noma DNA.
kanjani zonke lezi amakhemikhali akuvumelekile imikhiqizo ubuhle? Ukuze nombono ofanele ngezinto ngawe, nawa amaqiniso yesiteleka ezimbalwa imikhiqizo esitolo-uthenge ubuhle:
• I ukulawulwa yezimonyo in kanye siqu-ukunakekelwa imikhiqizo mancane; kuphela lula inqubo yokwamukela ekhona umkhiqizo ukuba eqinisekisiwe ukusetshenziswa.
• Uma uke ufunde ukunakekelwa kwesikhumba isithako amalebula esitolo-uthenge, ngezinye izikhathi ingaba umthombo kungaba ziyethusa scary! Silwenza ukubeka izinkulungwane compounds emikhiqizweni yakho - futhi wenze Ungaphazami; basuke ngokuvamile ngqo angena emzimbeni wakho. Kukhona enganele Ukubuyekeza kukahulumeni noma ukwamukelwa ngoba umkhakha ukunakekelwa kwesikhumba is hhayi ngokwanele ezilungisiwe emazweni amaningi.
• abenzi abaningi isikhumba ukunakekelwa nobuhle, kuhlanganise ukhuhla isikhumba, lotions, futhi izinto zokugeza isikhumba ebusweni, zisebenzisa compounds eziyingozi nama-gel esindayo njengoba phezu kwesisekelo sabo. Mineral amafutha kungukuthi ngokuvamile usetshenziswe ezitshalweni. Lapho isithako elenziwe amakhemikhali, ke clogs izimbobo zesikhumba. Isikhumba sakho ilahlekelwa amandla ayo zemvelo sokuxosha ubuthi, okuholela induna isikhathi eside izimpawu imibimbi.
• A amakhemikhali ambalwa eziyingozi abaqashiwe e izona esitolo-uthenge, Scrubs, kanye lotions zihlanganisa parabens sina (esetshenziselwa ukulondolozwa), imibala wafaka amakhemikhali (ezithathwa kuyi-petroleum noma amalahle itiyela imithombo). ngisho ngamakha (okuyinto ehlangene esikhiqiza komzimba nokucindezeleka zokuphefumula), toluene (okuyinto liyasetshenziswa ekubhebhetselisa upende), futhi sodium Lauryl sulfate noma SLS (okungase kubangele izinso nawokuphazamiseka zokuphefumula) kufanele zihlonishwe njengobukhosi izakhi kungase kungabi kangcono isikhumba sakho. Futhi lezi kumane izithako ezimbalwa ukugcina iso out for! Kuyinto kungani imoto obonakala ulula kungalimaza uma ungaqaphile nge yizici zamakhemikhali. Uma umgomo ozibekele wona uma usebenzisa le mikhiqizo iwukuba ubukeke kahle futhi uzizwe enhle, khona-ke ngokuqinisekile le kuyinkinga enkulu.
Ukubeka amakhemikhali engaziwa futhi elimazayo emzimbeni wakho kuzolinganisela zemvelo ukuphulukisa izinqubo isikhumba sakho. Eziningi zalezi amakhemikhali esetshenziselwa ukwelashwa isikhumba isikhumba ezizihluphayo, okuholela obomvu, ezomile, isikhumba olungaqinile.
Ngakho ake sibheke ezinye Izithako kangcono Skin Natural Ukunakekela
imikhiqizo Kuyajabulisa kukhona abaningi ukunakekelwa isikhumba yemvelo iyatholakala manje kunanini ngaphambili, futhi uhlu lwabo olude izinzuzo nangale ngisho isikhumba omkhulu looking kungaba kwazimangaza eziningi. Uma usebenzisa yemvelo, kanye nemikhiqizo eminingi ngezandla kanje njalo, hhayi kuphela ingabe lihle isikhumba sakho, kodwa ubhekene futhi ephuza Antioxidants, ligqamisa UV ukumelana isikhumba sakho, nasekuthuthukiseni izivikeli mzimba zakho, kakhulu.
Ukusebenzisa ezingacubunguliwe, izithako ngomphefumulo ukudla ungene isikhumba sakho - abaningi ukuthi kungenzeka ngisho kakade bese upheka ngaphakathi ekhishini lakho - siyokulethela aphathe isikhumba sakho, kangcono kunabaningi compounds kakhulu amakhemikhali asetshenziswa ngaphakathi umkhakha ukunakekelwa kwesikhumba. Ukusiza, ngisho uma umuntu isikhumba obucayi noma wabambana ngokomlando nge kokulungisa nzima ezifana induna kanye eczema ezihlobene isikhumba-.
Qala ngokwenza phezu ubuhle bakho isimiso ngokuzama la 13 imikhiqizo isikhumba esingokwemvelo ukunakekelwa:
Omunye izikhumba ezihlukahlukene kakhulu (nokudla) izithako kukhona, izinzuzo isikhumba amafutha kakhukhunathi zihlanganisa: ezikhulayo ecashile epidermal izicubu, ekuqedeni amaseli isikhumba esifile, besigadile ngokumelene sunburns, futhi equkethe elwa namagciwane, antifungal, elwa namagciwane, futhi izakhiwo antioxidant. Izifundo ngisho abonisa ukuthi amafutha kakhukhunathi unamandla ngokwanele ukuba alwe nezifo ezingamahlala khona isikhumba zihlukaniswa yokulimala amandla epidermal mngcele nothango cutaneous noma dermal ukuvuvukala, futhi bakhiwa dermatitis atopic (AD).
Sebenzisa imikhiqizo umthamo enempilo amafutha kakhukhunathi on kokubili isikhumba sakho futhi izinwele ukusiza ihlanzekile, moisturize, susa noma yikuphi izimonyo. ukuphulukiswa wayo izakhiwo zinhle kakhulu amanxeba yokutakula noma ephulukisa izibazi ngokushesha, futhi kuvimbele insingo ezishile. uwoyela kakhukhunathi ukusetshenziselwa ngaphakathi futhi inenzuzo obukeka ngayo. It ithwala izimfanelo elwa namagciwane kanye eqeda ukuvuvukala, plus esiningi amafutha enempilo ukuthi ukusiza okunomsoco esiswini sakho futhi ukwandisa amakhono mzimba.
Isikhumba sakho iyingxenye umzimba wakho, yimuphi nje omunye isitho emzimbeni wakho: Kufanele esifanele amanani mpilo nezakhi ukuba injected amaseli ukuze ubuthi kungenziwa zakhukhula. Yingakho uwoyela kakhukhunathi ukusiza nge-hormone futhi umsebenzi wokugaya ukudla kubaluleke kakhulu ukuze kube okungcono isikhumba kokwelashwa okunokwenzeka okungcono kakhulu.
tea isihlahla (Melaleuca alternifolia) iye yasetshenziswa amakhulu eminyaka e-Australia ukulwa okuphumayo, ububomvu, nokuvuvukala kwesikhumba. Nakuba isikhumba abantu abaningi sika uzophendula ophambene ejwayelekile ukwelashwa induna izinto ezinjenge acid, uwoyela tea tree ngokuvamile kahle eyamukelayo futhi iza olungaphelele, uma ikhona, we enqabayo side effects lapho ezihlangene amafutha yenethiwekhi futhi zisetshenziswa ngokuqondile isikhumba. izicelo uwoyela tea tree zibandakanya ukusebenza njengoba zemvelo eqeda ukuvuvukala, elwa namagciwane, elwa namagciwane anti-fungal - phytochemicals yayo kuyivumela ukuba nezimo kakhulu futhi kufinyeleleke ukunakekelwa isikhumba esingokwemvelo amafutha abalulekile kukhona.
oluyingozi amafutha quintessential Tea isihlahla liphuma cishe 230 izinhlobo ezihlukahlukene zezitshalo, cishe konke okuyizinto zimila Australia. Okuxhunyanwa ezisebenzayo obhekene ikhono yawo yokwehlisa amagciwane ayingozi zihlanganisa terpene hydrocarbon, monoterpenes, futhi sesquiterpenes. Abacwaningi ngiyafakaza ezingaphezu kuka 100 compounds yamakhemikhali ahlukahlukene hydrocarbon oluyingozi ukuthi kucatshangwa enamakha uyakwazi tramissmetd ngokusebenzisa emoyeni, ezimbotsheni zesikhumba kanye nolwelwesi lwamafinyila ukunikeza izinzuzo ukuphulukiswa. Kuyinto kungani uwoyela tea tree yinto ebaluleke kakhulu the best ekhaya zokwelapha induna.
3. Apple cider uviniga
Umkhiqizo isikhumba ukunakekelwa yemvelo ngendlela ephawulekayo okudingeka bashintshashintshe ngayo futhi ukonga, apula izinzuzo cider uviniga zibandakanya ukusiza ukubulala amagciwane (njengama-bacterium), izinkinga ukuhlanzwa isikhumba okubangelwa nezindaba esiswini, ngokuhlanza isikhumba nokusiza ukumisa induna, plus ukuhlinzeka izakhiwo antifungal. Ukusetshenziswa ACV ngezinkinga isikhumba sihlehlela yonke indlela emuva inhlanganiso yocezuningi (460-377 BC), kubhekwe "uyise wabo kwezokwelapha zanamuhla" futhi wanikela ngo ukusetshenziswa ACV anti-fungal noju eluhlaza ukuze bahlanze ezibangelwa ukungaphenduki embhedeni nokukhubazeka ekwelapheni izilonda isikhumba.
Lihlanganisa izuzisa kakhulu acetic acid namavithamini ethile efana magnesium potassium esakha ejenti detoxifying lapho ugxile ngaphakathi, ngoba ikhuthaza kokusebenza kwesibindi futhi usiza amagciwane nokulingana esiswini.
uju Raw ingenye imithombo ethembekile yemvelo izakhi, amavithamini, enzyme acid isikhumba-ekufukuleni. Izinzuzo uju eluhlaza zihlanganisa okuphumayo ekunciphiseni, ukuhlinzeka amafutha izakhiwo, equkethe izimfanelo isinqandakuvunda, ekhuthazayo isilonda ukuphulukisa, elwa komzimba noma ukuqubuka, nokusiza ukunciphisa izibazi. uju Raw kuyinto unheated, ezingacubunguliwe futhi unpasteurized ngokungafani uju kakhulu etholakala izitolo zokuthenga. Ngakho-ke, ke ungagcina yonke izakhi zalo abephule njengoba engekho ime ukucutshungulwa.
Njengoba uju elwa namagciwane kuyinto ikakhulukazi efanelekayo njengoba bandaging amanxeba kanye ukusha. It futhi kwesi zokwelapha ezisetshenziswa kakhulu ukuze yelaphe izifo ezibangelwa amagciwane, inabukeni dermatitis, dandruff, psoriasis nokuningi.
Uju lwakha kwenza umkhiqizo enkulu kubalulekile ukunakekelwa kwesikhumba njengenhlangano ikhambi induna ngoba singasetshenziswa zokugeza ebusweni ngisho ebucayi noma okuxubile izinhlobo isikhumba. Ukusebenzisa mayelana nengxenye isipuni, sekuqala ukufudumala phakathi izandla kanye ebusweni ngokushelela, ushiye i- 10 imizuzu ke thela ngamanzi afudumele futhi pat ezomile.
5. uLwandle LukaSawoti
Sea usawoti iqukethe ton amaminerali kanye nezakhi like magnesium, sodium, calcium, ne-potassium ukuthi ubamba kusukela amanzi olwandle lapho kukhiqizwa yayo. Eziningi zalezi amaminerali kukhona ezifanayo nabakhonza etholakala esikhunjeni amangqamuzana amehlo ethu okuthiwa futhi ngaphakathi emizimbeni yethu, okuyinto ngokunembile ukuthi kungani ngempela uLwandle Lukasawoti ungakwazi ukusiza ukunikezela nokulingana, ukuvikela nokulondoloza isikhumba.
Sebenzisa real zaseHimalaya noma Celtic ulwandle nosawoti buso okuzenzela ebusweni, toners, futhi Scrubs nezinye izithako isikhumba-ekufukuleni like uwoyela kakhukhunathi, lavender amafutha abalulekile, noju zokusetshenziswa. Lo sawoti zihlanganisa izimfanelo eqeda ukuvuvukala okukhazimulisa ubuso nokuzola okuphumayo, ukususa efile ngokusebenzisa amangqamuzana esikhumba somuntu kanye ukucasuka, umkhiqizo kawoyela ibhalansi, futhi ukusiza isikhumba ukugcina amazinga umswakama.
Ngokufanayo, ushukela Scrubs zifana, futhi kokubili izinhlobo athambile ngokwanele ukusebenzisa izikhathi eziningana ngesonto ukuyeka ikhule ezimbotsheni avimbekile uzosiza cell inzuzo kanye nokuvuselela.
Kuvele ultra-amafutha okunamafutha izithelo, izinzuzo ukwatapheya zihlanganisa equkethe ngamavithamini A, D, kanye no-E akwazi ukungena isikhumba. Kuyasiza okukhazimulisa ubuso sisha, ungakwazi umfutho ukukhiqizwa collagen futhi aphathe yobudala izindawo. Iphinde isebenza ukunciphisa ukuvuvukala isikhumba lapho osebenza ihlelwe ngokulandelana kwezihloko futhi ungenza ngaphakathi efanayo lapho kudliwa. Yenza i-Homemade Ukwatapheya Face imaski nge ukwatapheya fresh kuhlangene amafutha abalulekile, uju noma uwoyela yenethiwekhi ukufaka esikhundleni hydration bese ushiye isikhumba uzizwa dewy.
7. Lemon Amafutha Essential
Nge amalungu eqinile elwa namagciwane uyakwazi ukunciphisa ngisho abanamanxeba abulalayo sina amagciwane nesigqi, lemon namafutha abalulekile ingasetshenziswa ukuze wehlise induna okuphumayo kubangelwa amazinga aphezulu amagciwane washaya ikhule ezimbotsheni. Kuba njalo wusizo lantambama izibazi kanye nobudala izindawo, Ungakwazi exfoliate isikhumba, ikhanya iphinde ekhanyisa isikhumba, iphimbo isikhumba oily futhi alwe imibimbi.
uwoyela Lemon ingenye amafutha ezihlukahlukene kakhulu kubalulekile nginazo kusukela ingasetshenziswa njengendlela whitener namazinyo, ukhilimu cellulite, ilondolo freshener yasendlini ihlanzekile futhi ubuso ukugeza! Hlanganisa ngayo amafutha yenethiwekhi linjengamafutha Jojoba futhi massage ku inkinga izindawo isikhumba. Ungase futhi siqhubeka sikwenza izinwele zakho ukuze uthuthukise akhanye futhi ususe ezisalayo.
Native ukuze Morocco futhi wasebenzisa khona izizukulwane, uwoyela argan is ngakho uphulukisa ngoba uvithamini A no-vitamin E, Antioxidants ezahlukene, linoleic acid, omega-6 fatty acid. Argan akuyona omkhulu kuphela ngobumnene asenze isikhumba, kodwa futhi kwandisa akhanye futhi impilo izinwele zakho.
Sebenzisa imali encane yamafutha argan ngqo isikhumba evamile noma ikhathazwa kabili nsuku zonke ukusiza ukuphulukisa inflammations ezifana induna, bug ukulunywa, eczema futhi psoriasis, okushiya isikhumba umuzwa nokubheka bobusha.
Abantu abaningi bahlobanisa izinzuzo Aloe vera ephulukisa sunburns, kodwa bewazi yini ukuthi Aloe iqukethe amagciwane wokulwa, izithako opholile ukuthi ukulwa ukuvuvukala, ububomvu kanye ukulunywa? Kwaphela amakhulu eminyaka, Aloe iye yasetshenziswa ekwelapheni izifo zesikhumba, izifo kanye njengendlela yokwelapha yemvelo izifo fungal e yesintu yamaShayina.
imiphumela cwaningo yamuva nje ibonisa ukuthi Aloe vera kumanele ukusha nesilonda ukuphulukiswa, kodwa ngendlela engavamile futhi detoxifies wena kusuka ngaphakathi ngaphandle. Ngakho kangangokuba lapho wathola ngomlomo, Aloe kungehlisa ngisho zenani nobukhulu izimila kanye nezinambuzane esibindini, ubende kanye umnkantsha.
Aloe izitshalo vera ukukhiqiza izinto ezimbili ezisetshenziselwa imithi: ijeli ezitholakala amaseli phakathi ihlamvu, kanye latex lokho eqoqwe kusukela amaseli nje ngaphansi kwesikhumba amaqabunga '. Lezi lingasetshenziswa njengoba isikhumba esingokwemvelo ukunakekelwa ikhambi ukusha, frostbite, psoriasis amakhaza Izilonda.
Aloe vera kucatshangwa ukuthi ifomu kakhulu eziphila abakhuthele kwezinhlobo Aloe barbadensis miller futhi iqukethe kuka 75 izithako engase asebenzayo kuhlanganise ukuvuvukala, amaminerali, amavithamini, saccharides, okunamafutha acid, amino acid, enzyme, lignin futhi acid salicylic. Kukhona yini unikeza Aloe isisayine anti-microbial uphinde antifungal izakhiwo ezenza kube "Ukwelapha photodynamic" ekwelapheni isikhumba.
Omunye esetshenziswa kakhulu kabanzi yenethiwekhi amafutha, uwoyela Jojoba, is ngokuphawulekayo asenze futhi engadambisa ukusha, izilonda, izibazi, dermatitis, induna psoriasis kanye imibimbi. Bomdabu kuya eningizimu U.S futhi eMexico, la mafutha iye yasetshenziswa ekwelapheni psoriasis, induna, , yilanga kanye nesikhumba chapped kuzo zonke izizukulwane. It basetshenziswe wehlise balding ngoba isekela izinwele Kabusha, upholisa isikhumba futhi unclogs izinwele follicle.
Uma kuziwa isakhiwo kwamakhemikhali uwoyela Jojoba, kungcono ezahlukene ukuthi kungcono wax polyunsaturated. Ngenxa wax, uwoyela Jojoba kuhlaba eziwusizo wokuvikela isikhumba, libuyisele ukulawula umswakama, futhi esithobayo lishonile kunesikhumba futhi uboya.
Cishe kakade ngezinzuzo eziningi yokudla okunempilo alimondi, kodwa mhlawumbe ngabe umusha esebenzisa amafutha alimondi isikhumba sakho. uwoyela Almond akukhona nje ukuthi iphunga okukhulu, kodwa eqeda ukuvuvukala, elwa namagciwane, elwa namagciwane, futhi izakhiwo isinqandakuvunda. Kwenza uwoyela yenethiwekhi esihle kakhulu amafutha abalulekile kalula aphathe ukuqubuka, induna noma ukoma. Iphinde ihlangana kalula nge ezihlukahlukene iphunga, ngakho zama kuwo izona okuzenzela, buso noma lotions.
12. Shea ibhotela
Shea ibhotela iye sokuqashwa njengothisha umkhiqizo kwesikhumba ukunakekelwa yemvelo e-Afrika amakhulu eminyaka, lapho namanje ikakhulukazi kutshalwa futhi yathunyelwa emhlabeni wonke namuhla. Kwenza ongakhetha amafutha esihle kakhulu izinhlobo isikhumba esomile futhi awubizi kakhulu nokho ngempumelelo ekunciphiseni flaking, ububomvu noma uyaxebuka.
Zama ngayo Skin Homemade Ukunakekela Ibhotela exutshwe amafutha eziyizintandokazi zakho kubalulekile lenhlaka, zikagamthilini noma bergamot uwoyela noma nge-lavender futhi Mint yami okuzenzela lip namafutha.
13. U-Castor oil
Isetshenziswa ukuze ahlanze isikhumba, uwoyela ocolisekileyo ngempela "uwoyela iphele,"Ngisho noma lokho kungase kubonakale counterintuitive. Okuhlanza ebusweni, wena kuphela adinga ukusebenzisa ingxenye encane kakhulu, mayelana isipuni samafutha ocolisekileyo, zixutshwe e 1/4 inkomishi omunye uwoyela njenge kakhukhunathi noma alimondi. Uhlikihla ku ubuso bakho futhi ukubhucungwa, ke hashaza ngamanzi eliwu uyomuka ukungcola.